Shiinaha Duumada Pf Warshad Kit Imtixaan Degdeg ah iyo alaab-qeybiyeyaal | Kibir
Tijaabada Malaria Pf Ag Rapid waa tallaal soconaysa oo chromatographic immunoassay ah. Qeybaha baaritaanka tijaabada waxay ka kooban yihiin: 1) suufka midabka burgundy midabka burgundy oo leh monoclonal anti-pHRP-II antibody oo ku xiran dahabka loo yaqaan 'colloid gold （pHRP II-gold conjugates), 2) xuubka' nitrocellulose membrane strip 'oo ay ku jiraan koox tijaabo ah (Pf) iyo xakameyn band (C band). Kooxda Pf waxaa horay loogu soo duubay antibodies-ka loo yaqaan polyclonal anti-pHRP-II, iyo kooxda C oo horay loogu dahaadhay IgG anti-mouse.
Qalab kasta wuxuu ka kooban yahay 25 aaladood oo tijaabo ah, mid walbana waxaa lagu xiray boorso leh laba shay oo gudaha ah:
2. 25 x 5 µL wasakhda caaga yar.
Magaca Badeecada Tijaabinta Duumada Pf Ag
Hore: Qalabka Duumada Pf Pv Qalabka Imtixaanka Degdega ah
Xiga: Tube Muunad la tuuro
Talaabada 1: Keen shaybaarka iyo qaybaha tijaabada heerkulka qolka haddii la qaboojiyey ama la qaboojiyey. Isku qas ah
tijaabinta ka hor baaritaanka mar dhalaalay. Dhiig ayaa dhalaalaya kadib marka la dhalaaliyo.
nadiif ah oo fidsan.
Tilaabada 4: Ku buuxi caagaga yar ee caaga ah shaybaarka dhiiga si uusan uga badin laynka muunada sida ku cad sawirka soo socda. Muga muunada waa kudhowaad 5 µL.
Adiga oo si toos ah u haya dhibcaha dhibcaha, tijaabada oo dhan ku daadi bartamaha muunadda si fiican
hubinta in aysan jirin goobooyin hawo ah.
Tallaabada 6: Natiijooyinka waxaa lagu akhrin karaa 15 illaa 30 daqiiqo. Waxay qaadan kartaa in kabadan 15 daqiiqo in asalka soo cadeeyo.
Ha akhrin natiijooyinka 30 daqiiqo kadib. Si looga fogaado jahwareerka, iska tuur qalabka baaritaanka ka dib markaad tarjunto natiijada
NATIIJOOYINKA SAAMAYNTA AH: Haddii kaliya kooxda C-ga la soo saaro, baaritaanka wuxuu muujinayaa in aysan jirin antigen la ogaan karo oo soo bandhigaya muunadda. Natiijadu waa mid taban.
NATIIJOOYINKA Wanaagsan: Haddii labada koox ee C iyo Pf la soo saaro, tijaabadu waxay muujineysaa jiritaanka antigen pHRP-II. Natiijadu waa Pf mid wanaagsan. Tusaalooyinka leh natiijooyinka wanaagsan waa in lagu xaqiijiyaa habka (yada) tijaabada kale iyo natiijooyinka caafimaad kahor intaan go'aan wanaagsan la gaarin.
INVALID: Haddii aan la helin koox C ah, tijaabinta ayaa ah mid aan ansax ahayn iyada oo aan loo eegin midab buluug ah oo ku jira kooxda Pf sida hoos ku xusan. Ku celi tijaabada qalab cusub.